Miseensonni OPDO Wal harcaasutti kaate! | Biiftuubilisummaa
← Gaaffiin Barsiisotaa gaaffii Cunqurfamoota hundaa waan ta’eef, cunqurfamoota biyyattii hundarraa itti-hirmaannaatu barbaadama!
Omishi Shonkora Al-Abash yeroo lammataaf Hektarri 50 Barbadaaye →
Miseensonni OPDO Wal harcaasutti kaate!
Posted on April 8, 2012	by biiftuubilisummaa
Ergamtoota Mallas Zeenaawii kan ta’an qondaalonni olaanoon OPDO Maqaa “malaanmaltummaa” jedhuun miseensota OPDO amanamtoota Mallas ta’aniin aangoo irra har’ca’aafamaaniiru. Namoonni aangoo irraa harcaafaman kunniin Saamicha lafaa maqaa Investimentiitn Magaalota Oromiyaatti gaggeeffamaa tureen walqabatee walgaa’iiwwan ariifachoosoo wayyaaneen ji’oota lamaan dura labsiteee gaggeessaa turte irratti kanneen ummanni ifaan maqaa isaanii dhahee balaaleffachaa turetti, warra hidhata qabu jedhaman ta’uun beekameera. Gartuu Mallas Zeenaawii Warraaqsa Ji’a Amajjii KQWUO fi Qeerroodhaan labsamee tureen walqabatee Oromiyaa guutuutti Walga’iiwwan ariifachiisoo kumaatama gaggeessaa turuun ni yaadatama. Gartuun Mallasis gaaffii ummataatiif deebii kan deebise fakkaachuuf jecha tarkaanfii kana kan fudhate malee namoonni kunniin gochaa miseensonni OPDO kan biroo raawwataniin ala waan haaraa akka hin raawwatin keessa-beektoonni dubbachaa jiru.
Namoota aangoo irraa kaafaman:
Isheetuu Dasee – Barreessaa Olaanaa OPDO, miseensa koree giddu-galaa OPDO fi Koree Hojii Raawwachiiftuu OPDO kan ture, aangoo tokko malee miseensa OPDO ta’uu qofaan akka itti fufu;
Alamaayyoo Ijjiguu-Miseensa Koree Hoji raawwachiiftuu OPDO, miseensa koree giddu-galaa OPDO fi Ministeera Kominikeshinii mootummaatti minister Deetaa (aangoo sadanuu) irraa kaasudhaan aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun;
3. Lammaa Magarsaa- Hoogganaa Biiroo Misoomaa fi Gabaa Oromiyaa fi Koree Hojii raawwachiiftuu OPDO irraa kaasun aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun;
Zalaalam Jamaanaa- Hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa fi Miseensa Koree Hojii Raawwachiiftuu OPDO irraa kaasun aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun;
Ahimad Abbaagissaa- waggaa tokkoon dura Kantibaa Jimmaa kan ture, achirraa kaafamuun Ministeera Haqaatti Ministeer Deetaa ta’uun muudamee hojjataa kan ture amma immoo guutummaatti aangoorraa kaasun aangoo tokko malee miseensummaa qofaan akka hafu taasisuun;
Karaa biraa immoo bakka Isheetuu Dasee ture Aster Maammoo bakka buufamuun dhagahameera.